Iindaba-Yintoni iCarbon Fiber?
Ifayibha yeCarbon yile, kanye njengokuba ivakala ngathi-ifayibha eyenziwe ngekhabhoni. Kodwa, ezi fiber zisisiseko kuphela. Into eqhele ukubizwa ngokuba yi-carbon fiber yinto ebandakanya iifilaments ezibhityileyo ze-athom zekhabhoni. Xa idityaniswe kunye neplastiki ye-polymer resin ngobushushu, uxinzelelo okanye kwi-vacuum i-composite imathiriyeli yenziwe yomelele kwaye ilula.
Ngokufana nelaphu, amadama e-beaver, okanye isitulo se-rattan, amandla e-carbon fiber aku-weave. I-weave eyinkimbinkimbi ngakumbi, i-composite iya kuhlala ixesha elide. Kuluncedo ukuba nomfanekiso-ngqondweni wesikrini socingo esidityaniswe nesinye isikrini kwi-engile, kunye nesinye kwi-engile eyahlukileyo kancinane, njalo njalo, ngocingo ngalunye kwikhusi ngalinye elenziwe ngemisonto ye<em>carbon fiber. Ngoku khawufane ucinge lo mnatha wezikrini ugalelwe kwiplastiki engamanzi, emva koko ucinezelwe okanye ufudunyezwe de izinto zidibanise. I-angle ye-weave, kunye ne-resin esetyenziswe ngefiber, iya kugqiba amandla e-composite yonke. I-resin idla ngokuba yi-epoxy, kodwa inokuba yi-thermoplastic, i-polyurethane, i-vinyl ester, okanye i-polyester.
Kungenjalo, ukungunda kunokuphoswa kwaye kugalelwe imicu yekhabhoni phezu kwayo. I-carbon fibre composite iyavunyelwa ukuba inyange, rhoqo ngenkqubo yokufunxa. Kule ndlela, i-mold isetyenziselwa ukufikelela kwimo efunwayo. Le ndlela yobugcisa ikhethwa kwiifomu ezingantsonkothanga ezifunekayo ngokwemfuno.
Imathiriyeli yeCarbon fiber inoluhlu olubanzi lwezicelo, njengoko inokubunjwa kuxinaniso olwahlukeneyo kwiimilo kunye nobukhulu obungenamda. Ifayibha yeCarbon isoloko ibunjwa ibe yityhubhu, ilaphu, kunye nelaphu, kwaye inokwenziwa ngokwesiko kulo naliphi na inani leenxalenye ezidibeneyo kunye neziqwenga.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kweCarbon Fiber
Amacandelo emoto aphezulu
Iimeko ezikhuselayo zeelaptops kunye nee-iPhones
Usetyenziso olungakumbi olungaqhelekanga lunokufumaneka kwi:
Aeronautics kunye nemizi-mveliso ye-aerospace
Ishishini leoli negesi
Iimoto zomdyarho zeFormula-1
Abanye banokuxoxa, nangona kunjalo, ukuba amathuba e-carbon fiber anqunyelwe kuphela yimfuno kunye nengcamango yomenzi. Ngoku, kuqhelekile ukufumana i-carbon fiber kwi:
Iimpawu zezakhiwo zezakhiwo
Amagqabi einjini yomoya
Ukuba i-carbon fiber inokuthiwa nayiphi na into ephazamisayo, iya kuba yindleko yokuvelisa. Ifayibha yekhabhon ayiveliswa lula kwaye ibiza kakhulu. Ibhayisekile ye-carbon fiber iya kubaleka ngokulula kumawaka eedola, kwaye ukusetyenziswa kwayo kwiimoto kusathintelwe kwiimoto zomdyarho ezingaqhelekanga. I-carbon fiber ithandwa kakhulu kwezi zinto kwaye ezinye zibangelwa umlinganiselo wobunzima bobunzima kunye nokuchasana nomlilo, kangangokuba kukho imarike ye-synthetics efana ne-carbon fiber. Nangona kunjalo, ukulinganisa kudla ngokuba yi-carbon fiber okanye iplastiki nje eyenziwe ukuba ibonakale njengefayibha yekhabhoni. Oku kwenzeka rhoqo kwii-casings zokukhusela emva kwemarike kwiikhomputha kunye nezinye izinto ezincinci zombane zabathengi.
I-upside kukuba iinxalenye ze-carbon fiber kunye neemveliso, ukuba zingonakaliswa, ziya kuhlala zihlala ngonaphakade. Oku kubenza babe lutyalo-mali olulungileyo kubathengi, kwaye kwakhona igcina iimveliso zijikeleza. Umzekelo, ukuba umthengi akafuni ukuhlawulela iseti entsha yeeklabhu zegalufa zekhabhoni, kukho ithuba lokuba ezo klabhu zivele kwimarike esetyenzisiweyo yesibini.
Ifayibha yeCarbon ihlala ibhidaniswa ne-fiberglass, kwaye ngelixa kukho ukufana kwimveliso kunye ne-crossover ethile kwiimveliso zokugqibela njengefenitshala kunye nokubumba kwemoto, zahlukile. I-Fiberglass yipolymer eyomelezwe ngemisonto elukiweyo yeglasi ye-silica kunekhabhoni. Iicomposites zekhabhoni zefiber zomelele, ngelixa i-fiberglass inokuguquguquka ngakumbi. Kwaye, zombini zineendlela ezahlukeneyo zeekhemikhali ezenza ukuba zilungele usetyenziso olwahlukileyo.
Ukurisayikilisha i-carbon fiber kunzima kakhulu. Ekuphela kwendlela ekhoyo yokuphinda isetyenziswe ngokupheleleyo yinkqubo ebizwa ngokuba yi-thermal depolymerization, apho imveliso ye-carbon fiber ishushu kakhulu kwigumbi elingena-oksijini. Ikhabhoni ekhululiwe inokukhuselwa kwaye isetyenziswe kwakhona, kwaye nayiphi na into edibeneyo okanye eyomeleziweyo esetyenzisiweyo (i-epoxy, i-vinyl, njl.) iyatshiswa. Ifayibha yeCarbon nayo inokwaphulwa ngesandla kumaqondo obushushu asezantsi, kodwa izinto ezisisiphumo ziya kuba buthathaka ngenxa yeentsinga ezimfutshane, kwaye ngenxa yoko kusenokwenzeka ukuba zingasetyenziswa kwesona sicelo sifanelekileyo. Umzekelo, iqhekeza elikhulu letyhubhu elingasasetyenziswayo linokwahlulwa, kwaye iindawo eziseleyo zisetyenziselwa iibhokisi zekhompyuter, iibrifkheyisi okanye ifenitshala.
Ifayibha yeCarbon sisixhobo esiluncedo ngendlela emangalisayo esetyenziswa kwiicomposites, kwaye iya kuqhubeka nokukhulisa isabelo sentengiso yemveliso. Njengoko iindlela ezininzi zokuvelisa i-carbon fiber composites ngokwezoqoqosho ziphuhliswa, ixabiso liya kuqhubeka nokuwa, kwaye amashishini amaninzi aya kuxhamla kule nto ikhethekileyo.
I-Carbon Fiber Rod, Icwecwe leCarbon, ICarbon Fiber Square Tube, Umbhobho weCarbon Fiber, I-Carbon Fiber Cue Shaft, ICarbon Fiber Telescopic Tube,